နောက်ထပ် LEGO တစ်ခု Monkie Kid set သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင်အငြိမ်းစားယူသည်
16 / 09 / 2021 16 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 185 Views စာ0မှတ်ချက် 80006 White ကနဂါးမြင်းစက်ဘီး, 80012 မျောက်ဘုရင်က Warrior Mech, 80018 Monkie KidCloud Bike, 80024 အဆိုပါဒဏ္endာရီပန်းအသီးကိုတောင်, Lego, Lego Monkie Kid, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, Monkie Kid, မကြာခင်အနားယူတော့မည်, အဆိုပါ LEGO Group
နောက်ထပ်အသစ်ထွက်သည် Lego Monkie Kid မော်ဒယ်သည်အလွန်တိုတောင်းသောသက်တမ်းရှိရန်သတ်မှတ်ထားပုံရသည် Lego Group သည် ၂၀၂၂ မှယခုနှစ်ကုန်အထိ၎င်း၏အငြိမ်းစားယူမှုကိုအရှိန်မြှင့်လိုက်သည်။
80018 Monkie KidCloud Bike သို့သာရောက်ခဲ့သည် LEGO.com နှင့် Lego ၂၀၂၁ ခုနှစ်မတ်လတွင်စတိုးဆိုင်များရှိသော်လည်းယခုဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ အွန်လိုင်းနှင့်အုတ်နှင့်အင်္ဂတေစတိုးဆိုင်နှစ်ခုလုံးမှထွက်ခွာရန်သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခက်ခဲပြီးမြန်သောရက်မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ ၂၀၃ အပိုင်းအစအစုံသည်ယခုနှင့်တစ်ချိန်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ နောက်နှစ်မကုန်ခင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်ရဲ့အစဟာအရင်အတိုင်းပါပဲ ယခင်ကကိစ္စ.
၎င်းသည်အလွန်စပ်စုသောဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းကြောင့်သာဖြစ်သည် 80018 Monkie KidCloud Bike အတော်လေးအသစ်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ပထမဆုံးပုံမှန်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် Monkie Kid ယူရို ၂၀ အောက်ရောက်ဖို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ နောက်ထပ်စျေးအသက်သာဆုံး set သည် ၂၀၂၀ ဖြစ်သည် 80006 White ကနဂါးမြင်းစက်ဘီး retire ၂၄.၉၉ / ၃၄.၉၉ / € ၂၉.၉၉ ဖြင့်လက်လီရောင်းချသောဤအငြိမ်းစားလည်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့မှာစျေးပိုသာသည်။
အများစုကပိုကြီးပါတယ် Lego Monkie Kid အခြားတစ်ဖက်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်များအပါအ ၀ င်နောက်နှစ်များတွင်စင်ပေါ်တွင်ဆက်လက်ရှိနေလိမ့်မည် 80012 မျောက်ဘုရင်က Warrior Mech နှင့်ယခုနှစ်ပါပဲ 80024 အဆိုပါဒဏ္endာရီပန်းအသီးကိုတောင်မရ။ သဘာဝကောက်ချက်ချရန်မှာပစ်မှတ်စျေးကွက်ဖြစ်သည် Monkie Kid ပိုကြီးပြီးပိုစျေးကြီးတဲ့အစုံတွေကိုပိုကြိုက်တယ် (ပြီးတော့၊ အဲဒီ့မော်ဒယ်နှစ်ခုကတခုတည်းဘဲ အထူးအမည်ပေးထားသည် လာသကဲ့သို့ အမေဇုံ အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါနောက်ဆုံးအပတ်)
ကမ်းခြေကိုမချိုးဖောက်ဘဲနဲ့ခရီးရဲ့အနောက်ဘက်ခရီးကကမ်းလှမ်းတဲ့အရသာကိုမင်းပိုကြိုက်ချင်ရင်ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ။ 80018 Monkie KidCloud Bike နှင့် 80006 White ကနဂါးမြင်းစက်ဘီး သူတို့ကောင်းကောင်းမပျောက်ခင် ဒီမှာစာရင်းအပြည့်အစုံပါ Monkie Kid လက်ရှိအငြိမ်းစားယူမည့်ရက်အားဖြင့်သတ်မှတ်သည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2021
40472 Monkie KidRC ပြိုင်ပွဲ
80006 White ကနဂါးမြင်းစက်ဘီး
၈၀၀၀၇ Iron Bull Tank
80009 Pigsy ရဲ့အစားအစာထရပ်ကား
80010 Demon Bull ဘုရင်
80011 အနီရောင်သားရဲ့ Inferno Truck ကား
80014 စန္ဒီရဲ့ Speedboat
80015 Monkie Kid's တိမ်တိုက် Roadster
80016 အဆိုပါ Flaming Foundry
ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2022
80008 Monkie Kid's Cloud ဂျက်လေယာဉ်
80012 မျောက်ဘုရင်က Warrior Mech
80013 Monkie KidTeam Secret အဖွဲ့ချုပ်
80019 အနီရောင်သားရဲ့ Inferno ဂျက်လေယာဉ်
80020 White ကနဂါးမြင်းဂျက်
80021 Monkie KidLion ဂါးဒီးယန်း
80023 Monkie Kidအဖွဲ့ Dronecopter
80025 စန္ဒီရဲ့ပါဝါ Loader ကို Mech
80026 Pigsy ရဲ့ခေါက်ဆွဲ Tank
တစ်ခုချင်းစီ၏စာရင်းအပြည့်အစုံအတွက် Lego ၂၀၂၁ တွင် (ယခုလမှ) အနားယူရန်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဒီမှာသွား.
← LEGO ဘယ်နှစ်ယောက် Star Wars Republic Gunships သည် Republic Gunships များလွန်းသလား။
LEGO Nintendo 71395 Super Mario 64 Question Mark Block ၏ပထမဆုံးသုံးသပ်ချက်များဒီမှာ →